Sina: Ny Fanorenana Repoblika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Desambra 2018 13:50 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, македонски, English
Ho fankalazana ny faha-60 taona niorenan'ny Repoblikam-Bahoaka ao Sina ny 1 Oktobra, halefa rahampitso 17 Septambra ny sarimihetsika ”Ny Fanorenana Repoblika”. Niteraka resabe mafana tao amin'ny Aterineto ilay sarimihetsika – tsy noho ilay sarimihetsika manokana, fa noho ny fiavian'ireo mpanakanto
Nilaza ny tatitra am-baovao sasany tamin'ny Aogositra fa tamin'ireo mpilalao sarimihetsika 172 sy talen-koronantsary malaza nandray anjara tamin'ilay sarimihetsika, 21 no manana zompirenena vahiny.
Niresaka mikasika izany tao amin'ny bilaoginy i Han Han (韩寒), mpanoratra fanta-daza ao amin'ny tanibe Sina, ny 12 Aogositra:
Ny hevitro manokana dia hoe raha toa ka afaka miteraka ny fanovan'ireo mpilalao sarimihetsika maro ny zompireneny ny firenena iray, mila mizaka andraikitra sasantsasany io firenena io.
Safidin'izy ireo manokana ny hanova ny zompireneny. Mitovy amin'ny fisaraham-panambadiana ihany izany: angamba nanjavona ny fitiavany ny tanindrazany, na koa nahita tsaratsara kokoa izy. Misy fomba fijery ara-pitondrantena afaka hitsikerantsika azy ireo, kanefa tsy misy zavatra mibirioka amin'ny toetrany manokana.
Ho an'ireo olontsotra Sinoa, izany hoe, ho an'ireo tsy afaka misakafo tsara, na miaina tsara, na miala voly, na mametraka fifandraisana tsara, na miteraka, na marary na maty, ny teboka lehibe dia ny tsy fahafahan'izy ireo mifindra monina. Noho izany, voajanahary ho azy ireo ny mitsiriritra ireto mpilalao sarimihetsika mandositra ny firenena ireto.
Niteraka valiny be dia be ity lahatsoratra am-bilaogy ity. Misy tena mitsikera be azy io:
Raha toa ka vahiny izy ireo, nahoana no tsy mampivoatra ny asany any ampitan-dranomasina fa tsy aty Sina
Mpilalao sarimihetsika ihany no voakasik'io lisitra io. Raha hampidirintsika ny mpahay siansa sns sns, mety mbola hahagaga kokoa ny vokany. Manontany tena aho raha toa ka tia mivadika ho vahiny ireo mpandraharaha, heveriko fa mety ho tiany izany raha toa ka nanana fahafahana izy ireo.
Ny fahafahan'ny vahiny mandray anjara anatin'ity sarimihetsika ity dia mampiseho fa tsy manana fotokevitra ijoroana sy voninahitra ireo mpitantana. Vokany, ambanian'ny hafa i Sina.
Misy karazana fomba fijery hafa ihany koa, indraindray maneso:
Namakivaky làlana lavitra mba hamokarana ity sarimihetsika ity ho antsika ireo mpanakanto vahiny mandray anjara anatin'ny sarimihetsika Sinoa, indrindra ”Ny Fanorenana Repoblika”, isika, Sinoa, dia tokony hisaotra azy ireo noho ny asa mafy vitany.
… Aza dia mandray an-tendrony be kosa e. Tsy midika famitahana ny firenentsika ny fananana zompirenena vahiny. Miverina mba hanao sarimihetsika ho an'i Sina izy ireo, mba hisoloana tena an'i Sina any amin'ireo fetibe iraisam-pirenena natokana ho an'ny sarimihetsika. Mitondra ny anjara birikiny ho an'i Sina izy ireo…
Tsy hoe tsy tianay ity firenena ity, tsy tianay fotsiny ny rafitra ao aminy!
Tsy manan-jo hitsikera ny hafa isika. Samy manana ny safidiny ny tsirairay. Tsy midika tsy fitiavan-dry zareo ny firazanana Sinoa ny fananany zompirenena vahiny.